Chii chinonzi Airdrop? Inoshanda sei paIOS neMac? Tsvaga! | IPhone nhau
louis padilla | | iOS 10, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Kwakaenda nguva idzo vashandisi ve iPhone vasingakwanise kutumira mapikicha, mavhidhiyo kana mafaera kune mamwe madhivhisi. Chii chinonzi AirDrop? Yekuzvarwa basa reIOS uye macOS yatinogona kutumira zvemukati zvakasiyana kwazvo kune mamwe madivayiri, zvingave kubva kuIOS kuenda kuIOS, kubva kuIOS kuenda kuMac kana kubva kuMac kuenda kuMac. Chero mubatanidzwa unogoneka. Isu tinotsanangura zvizere zvese mashandiro anoita AirDrop, kubva kune izvo zvishandiso zvinoenderana, maitiro ekugadzirisa izvo zvinorambidzwa kuti zvidzivise kubatana kusingadiwe. Iwe unoda kuve tenzi neAirDrop? Mukati mune zvese zvamunoda.
1 AirDrop inoshanda sei
2 Ndezvipi zvishandiso zvinotsigirwa
3 Maitiro ekumisikidza AirDrop pane iOS
4 Maitiro ekumisikidza AirDrop pane macOS
5 Maitiro ekugadzirira mudziyo wako kuti ugamuchire iyo faira
6 Maitiro ekutumira mafaera uchishandisa AirDrop
7 Iyo inokurumidza uye inoshanda kwazvo system
AirDrop inoshanda sei
AirDrop inoshandisa Bluetooth neWiFi kuona zvishandiso uye kuendesa mafaera, saka zvinodikanwa kuti zvese zviri zviviri kubatana zvishande. Bluetooth inoshandiswa kuona zvishandiso uye kutanga kubatana, nepo kufambisa faira kunoitwa kuburikidza neWiFi kubatana, nekukurumidza uye nehukuru bandwidth. Asi usatombo kunetseka nekuti hazvidi kuti ubatanidzwe kune netiweki yeWiFi, iko kubatana kwacho kunoitwa zvakananga pakati pemidziyo miviri, pasina kuve nenetiweki pakati.
Iyi nzira yekushanda inobvumidza kuti kunyangwe iwe uine AirDrop yakagadziriswa iyo yekushandisa bhatiri yakaderera kwazvo, sezvo kutsvaga kwemidziyo kwaitwa kuburikidza neBluetooth yakaderera kudyiwa, chinongedzo chakavandudza zvakanyanya mumakore achangopfuura uye izvo hazvitore mari yekuwedzera bhatiri.
Ndezvipi zvishandiso zvinotsigirwa
Sezvo Makaralı neWiFi zvinoshandiswa kuendesa mafaera, izvo zvinoda hazvifanirwe kunge zvakakwirira pakutanga, nekuti ese maPad, iPhone, iPod Touch uye Mac makomputa ane aya marudzi ekubatana. Asi pane mamwe masisitimu uye zvemhando yepamusoro zvinosiya zvimwe zvishandiso zvekare.
Kune zvishandiso zveIOS zvakafanira:
iOS 7 kana gare gare
iPad 4 kana gare gare
iPad Mini 1 chizvarwa kana gare gare
iPod Toch 5th Generation uye gare gare
Kune Mac makomputa pane zvakasiyana zvinodiwa kana iwe uri kutumira kune imwe Mac kana chishandiso cheIOSsemaMacs anotsigira akasiyana mavhezheni eAirDrop, nepo zvishandiso zveIOS zvichida imwe yazvino vhezheni. Kana iwe uchizotumira kubva kuMac kuenda kuMac iwe unoda:
MacBook Pro Late 2008 kana kuti gare gare (kunze kweMacBook Pro 17 - Gare gare 2008)
MacBook Mhepo Kunonoka 2010 kana gare gare
MacBook Late 2008 kana kuti gare gare (kunze kwechena MacBook Late 2008)
iMac Pakutanga 2009 kana kuti gare gare
Mac Mini Mid 2010 kana gare gare
Mac Pro Pakutanga 2009 neAirPort Yakanyanyisa kana Mid 2010 kadhi
Kana iwe uchida kutumira kubva kune chishandiso cheIOS kuenda kuMac, kana zvinopesana, iwe unotanga kuda chishandiso chinoenderana neAirDrop, yatonyorwa pamusoro, uye Mac kubva kune anotevera:
Chero chero komputa kubva 2012 kana gare gare, ine OS X Yosemite kana gare gareKunze kweMac Pro Mid 2012.
Maitiro ekumisikidza AirDrop pane iOS
Kuti AirDrop ishande zvinongodiwa chete kuti Bluetooth neWiFi zvishandiswe. Tambanudza iyo inodzora nzvimbo uye ita shuwa kuti AirDrop bhatani rebhuruu, zvichiratidza kuti kugamuchirwa kuri. Izvo chete zvigadziriso zvaunofanirwa kugadzira kuratidza uyo waunobvumidza kutumira mafaera kune: kune chero munhu, chete avo vaunazvo pakati pehama dzako, kana kune chero munhu. (iyo ichavhara AirDrop). Ndokumbira utarise kuti kana Usinga netseke modhi inogoneswa, AirDrop ichave yakaremara otomatiki.
Zvekuvanzika harisi dambudziko, nekuti chero kuendesa kwefaira kubva kune mumwe munhu, angave ari wekubata kana munhu asingazivikanwe, zvinoda kugamuchirwa kwako. kukiyinura mudziyo. Naizvozvo, kumisikidza kuvhurika kune wese munhu kana chete kune vako vaunotaura kunongoreva kuti vausingazombokwanisa kana kukushungurudza neruzivo rwekuti ivo vanoda kukutumira iyo faira. Chimwe chinhu chakakosha ndechekuti kana iwe ukasarudza iyo chete yekufona sarudzo, iwe unofanirwa kuve neshuwa kuti mune ako ajenda iwe waisanganisira iyo foni nhamba uye / kana email inosangana neICloud account yemunhu anoda kukutumira iyo faira.
Maitiro ekumisikidza AirDrop pane macOS
ZveMacOS, kumisikidzwa hakuna kuomesa chero uye kwakavakirwa zvakafanana nezvakaitika muIOS pakusarudza kuti ndiyani anogona kukutumira mafaera. AirDrop inosanganisirwa muKutsvaga, uko iine chikamu chayo mukoramu yekuruboshwe. Mukati meichi chikamu tichaona sarudzo senge muIOS (Hapana, Ivo chete vanobata uye Munhu wese), uye tichaona michina iripedyo yatinotumira michina, kana kunaani watinogona kuigamuchira.
Maitiro ekugadzirira mudziyo wako kuti ugamuchire iyo faira
Tine zvese zvakagadziriswa zvakakwana, tinova nechokwadi chekuti yedu yeWiFi neBluetooth yekubatanidza yashandiswa, mudziyo wedu unoenderana, uye tinoda kuti vatitumire faira. Kunyangwe kugamuchirwa kweAirDrop kunofungidzirwa kuti "Otomatiki", chero munhu anovhura yavo yemenu menyu kuburikidza neAirDrop anofanirwa kuona chako chishandiso Chero bedzi sarudzo dzako dzakavanzika dzakakodzera, pane dzimwe nguva apo mupiki watinoda asingaoneke.
Kana izvi zvikaitika, zvese zvatinofanirwa kukumbira inogashira iyo faira kuratidza iyo Center Center muIOS, kutsvedza kubva pasi kumusoro pachiratidziri, kana kana uine macOS kuvhura Finder uye sarudza iyo "AirDrop" chikamu mune column kuruboshwe. Kana izvi zvangoitwa tinofanirwa kuvaona pachiratidziro chemugove. Kana isu tichiri kusazviona, iwe unofanirwa kuongorora sarudzo dzepachivande kana iwe uine shoma faira kutumira kana kunyangwe AirDrop yakaremara.
Maitiro ekutumira mafaera uchishandisa AirDrop
Kana tangoona kuti zvishandiso zvedu zvinowirirana neAirDrop, kuti isu tine maWiFi neBluetooth yekubatanidza yakamisikidzwa uye kuti zvese zvishandiso (anotumira uye anogamuchira) zvave padhuze kuti zvionekwe kuburikidza neBluetooth, tinogona kutanga kutumira faira. Ndeapi mafaera anogona kugovaniswa? Iyo inogona kugoverwa kubva kupi? Mhinduro iri nyore: chero faira inowirirana neiyi dhirivhari sisitimu uye kubva kune chero application inotsigira iyo yekugovana sarudzo. Iyo haifanire kunge iri yekuzvarwa application, yechitatu-bato kunyorera inogona kunyatso kutumira mafaera neAirDrop.
Iyi ingori mienzaniso mishoma yezvatinogona kugovana: mapikicha nemavhidhiyo, Apple Music kana Spotify zvinyorwa, nhau kubva mupepanhau kubva kuApp application, mapeji ewebhu kubva kuSafari, zvinyorwa zvemarudzi ese kubva kuICloud Drive ... Pane chete muganho: hapana zvinyorwa zvine copyright. Iwe unogona kugovera chinongedzo kune rwiyo rweApple Music, asi kwete iyo rwiyo faira, uye zvakafanana zvinoitika nechero bhaisikopo rauinaro pane yako iPhone, kunze kwekunge uine iro mune yekuchengetedza application senge Dropbox kana Google Drive.
Kutumira faira kuri nyore kwazvo. Isu tinongofanirwa kusarudza iyo faira irikubvunzwa, tarisa mune yekushandisa yeiyo square icon nemuseve (1) uye wobva wadzvanya uye ipapo iyo chaiyo iOS «Kugovana» ​​menyu ichaonekwa. Pamusoro tinofanirwa kuona vanogamuchira vane AirDrop inoshanda (kana vasingaoneke, tarisa chikamu chakapfuura uko kwatakaratidza maitiro ekuita kuti vaoneke), sarudza chinogamuchira (2) uye mirira kuti iyo faira itumirwe. Kana chiri chishandiso chine yedu imwechete account yeICloud, iko kutumira kunongoerekana kwaitika, kana iri imwe account, anogamuchira anofanira kusimbisa risiti, iyo yaunofanirawo kuvhura iyo kifaa. Mushure memasekondi mashoma iyo faira ichave yaendeswa uye ichave yakasimbiswa kwatiri pane yedu kifaa (3).
PaMac maitiro acho akafanana chaizvo, pamwe neshanduko dziri pachena nekuda kwenzvimbo dzakasiyana dzaanadzo. AirDrop iri mukati meSarudzo sarudzo yeavo anowirirana maapplication, seSafari. Sezvo muIOS tinotsvaga iyo square icon nemuseve uye sarudza AirDrop.
Vangangodaro vanogamuchira mafaera anozoonekwa muwindo reAirDrop., uye sezvatakaita pakutanga, isu tinongofanirwa kusarudza kuti ndeyani uye yakamirira masekondi mashoma kuti iyo faira itumirwe.
Kana zvikaitika kuti hapana chishandiso kubva pakushandisa sarudzo iyoyo, nekuti iri faira, tine mikana yakawanda yekushandisa AirDrop. Chekutanga kuvhura hwindo rekutsvaga uye sarudza "AirDrop" mukoramu yekuruboshwe.. Tichaona vanogamuchira vari kushanda uye isu tichakwanisa kudhonza chero chinhu kune iro hwindo kuti vatumirwe kwavari.
Uyewo Tinogona kusarudza iyo faira kubva kuKutsvaga, uye nekukanya kurudyi sarudza sarudzo «Goverana> AirDrop» uye hwindo rekusarudza rinogashira richaonekwa, semumuenzaniso wekutanga.
Iyo inokurumidza uye inoshanda kwazvo system
Zvirokwazvo kanopfuura kamwe chete iwe wakagovana mafoto kana mavhidhiyo kune munhu anga ari padhuze newe achishandisa mameseji application senge WhatsApp kana email. Pamusoro pekushandisa kwedata, iwe unofanirwa kuziva kuti mafaera aya akamanikidzwa uye nekudaro anorasikirwa nehunhu, uye zvinoenderana nekufukidzwa uye saizi zvinogona kutora nguva yakareba kutumira. AirDrop chirongwa icho Unogona kuishandisa nechero iPhone, iPad kana Mac mushandisi uye kuti nenzira yakapusa uye inokurumidza, pasina kuita internet yekubatanidza uye pasina kurasikirwa kwemhando, Inokutendera iwe kugovana iwo mafaera nemumwe munhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Chii chinonzi AirDrop?
Apple inomisa kubhadhara kuQualcomm kudzamara mutongo wapfuudzwa
Kushaya kugona? Iyi Anwendung inowedzera mutsara -zvakawanda kana zvishoma- zvine mamiriro kune ako mafoto